Sunday 10th March 2019 06:58:48 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Burco
Mufakar Ingiriis ahaa oo la odhan jiray John Locke ayaa qadacay qaran waa hoggaanka.Locke waxa uu bilawgaba diiday dadku ma noolaan karaan dawlad la'aan. Dawlada ayaa keenta wanaagga iyo aragtida odhanaysa talada haloo daayo xukaamta. John Locke oo wakhtigii Ameerika loo guuray hantiyey beer, waxa afkaartiisa laga dhex arkayaa in ay ridiyeyso laba sheegasho, teegeeraysana dood:
Locke waxa uu isu arkaa muwaadin. Hindidii cascasayd ee dhulka loogu yimid, may lahayn dhulka maxa yeelay, iyagu waxa ay ahayeen reer guuraa. Dhulka waxa leh ninka ku darsada tacab/labour. Gumayste, ha noqdo boqor ama ninkii kala ba'e ma go'aamin karo masiirka halkan. Halkan waxa taladeedu u taalaa raga/haweenka dagan. Qarankuna waa af-garad dhex mara bulsho.
"18 May Gaar Uma Ah Beesha Dhexe Oo Qudha Ee Waa Astaan Qaranku Leeyahay" Xildhibaan Aadan Muxumed Hoori (Mataan
Qaranku Ma Madaxweynahaa? WQ. Axmed-xiis Dharbaan
[Daawo Live:-] Taliye Caare Oo Hanjabaya Ka Dib Markii Ay Ciidmada Qaranku Caydhasadeen Maalintii Shalay
Wadadii Rajada ee Berbera Corridor waxay ku soo ururtay in laynoo kab kabo hadaba dhismaha Dekedana ka filo in laguu kab